Fitsidihana teto Madagasikara :: Naneho ny hafaliany sy ny fahafaham-pony ny Papa Fransoa • AoRaha
Fitsidihana teto Madagasikara Naneho ny hafaliany sy ny fahafaham-pony ny Papa Fransoa
ben’ireo Eveka eto Madagasikara, taorian’ny fandalovan’ny Papa Ray Masina Fransoa teto Madagasikara.
“Namafy fiadanana sy fanantenana tokoa izy tamin’ny famangiana sy ny hafatra ary ny fizarana ny Eokaristia nataony teto amintsika. Nahazo tso-drano isika Malagasy rehetra sy ny Nosintsika. Enga anie ho tafapaka amintsika ny fiadanana sy ny fanantenana nafafin’ny Papa Ray Masina”, hoy ny kardinaly Désiré Tsarahazana, rehefa avy nanatitra ny Papa Ray Masina teny amin’ny seranam-piaramanidina teny Ivato, omaly maraina.
Sady nisaotra ny fitondram-panjakana no nidera ny fahafoizan-tena nananan’ny kristianina sy ny Malagasy tsy ankanavaka tamin’ny fikarakarana ny fandraisana tsy nisy tomika ny Papa Fransoa ny Kardinaly.
Nandritra ny lahateny nataon’ny Arsevekan’i Toamasina no nanararaotany nanaovana tatitra momba ny hafatra nampitain’ny Papa Ray Masina taminy, mialoha ny niaingany teto Madagasikara. “Naneho mivantana ny hafaliany sy ny fahafaham-pony ny Papa Fransoa na dia fotoana fohy aza no nandalovany teto amintsika. Gaga izy nahita ny hafanam-po sy ny firaisam-po ary ny fahaizantsika mandray vahiny tamin’ny fandalovana teto Madagasikara”, hoy hatrany ny Kardinaly Désiré Tsarahazana.
Fanaraha-maso ny fiainam-bahoaka
An-kilan’izay, nanambara ny fahafaham-pony ihany koa mompera Germain Rajoelison, mpandrindra ankapobeny lefitry ny Komity nisahana ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fandraisana ny Papa Fransoa teto amintsika. “Tsy hitazam-potsiny fa hijoro ho mpanara-maso ny fiainam-bahoaka ny fiangonana taorian’iny fotoan-dehibe iny”, hoy izy teny Ivato.
Omaly tolakandro no nanao tatitra mikasika ny asa nosahaniny tamin’ny fandraisana ny Papa Ray Masina ny komity. Isan’ny nanampy azy ireo tamin’ny hoenti-manana tamin’izany ireo malala-tanana sy ny orinasa “Orange Madagascar”. Vola roanjato tapitrisa ariary no voaangona nentina nanampiana ny komity tamin’ny fikarakarana iny fihavian’ny Papa Fransoa teto Madagasikara iny.
Tamin’ny 9 ora sy sasany maraina no nanainga teny amin’ny seranam-piaramanidina teny Ivato ny fiaramanidin’ny kaompaniam-pitaterana “Air Madagascar” nitondra ny Papa Fransoa hihazo an’i Vatikana (Rôma). Nanatitra azy teny an-toerana ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry mivady sy ireo lehibena andrimpanjakana eto amintsika. Nisy ihany koa ny fisaorana manokana nataon’ny Filoham-pirenena ny fianakaviam-ben’ny fiangonana katolika eto Madagasikara tamin’ny fandraisana ny Papa Ray Masina.
Fahavitan’ny fitokana-monina Efa nody any an-tranony i Marion
Fifindran’ny coronavirus Mihatanora ireo marary avy amin’ny fifampikasohana
Fifidianana ben’ny tanana sy mpanolotsaina :: Homen’ny Ceni fe-potoana 48 ora aorian’ ny rahampitso ireo mbola ho kandidà
Fandraisana ny Papa Fransoa :: Nidera ny firaisankina nasehon’ ny Malagasy Rajoelina Andry